Madaxweyne Farmaajo Oo soo Saaray War la Xiriira Geerida Dr. Cali Khaliif. – Heemaal News Network
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhowaaqay in dowladda Soomaaliya ay aa sheer qaran ah u sameyn doonto Ra’iisul Wasaarihii Hore ee Xukuumaddii Ku-meelgaarka ahayd ee Soomaaliya Marxuum Cali Khaliif Galeyr oo maanta ku geeriyooday magaalada Jigjiga.
Qoraal kasoo baxay Villa Somalia ayaa ugu horrey waxa uu madaxweynaha ku amray xukuumadda Federaalka Soomaaliya in la magacaabo Guddi Qaran oo ka shaqeeya Aas-Qaran oo loo sameeyo Marxuumka, si loo maamuuso dadaalkii uu ku bixiyey dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale tacsi tiiraanyo leh u diray qoyskii, qaraabadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Alle ha u naxariistee
“Alle ha u naxariistee Marxuum Cali Khaliif Galeyr waxa uu door muuqda kaga jiraa sooyaalka dalkeenna. Waxa uu noqday Ra’iisul Wasaarihii Dowladdii Kumeel gaarka ahayd ee lagu soo dhisay Carta iyo xilal kale oo uu ugu soo adeegay dalkeenna iyo shacabka Soomaaliyeed si hufan, waddaniyad iyo daacadnimo leh,” ayuu yiri madaxweynaha.
Gudomiyaha Bankiga Dhexe Ee Somaliland Oo Xariga ka Jaray Bankiga Borama.